दुर्भाग्यवश, आधुनिक खाना उद्योग रंगीन, सुँगुर र संरक्षक बिना काम गर्न सक्दैन। डब्ल्यूएचओ को अनुसार, तिनीहरू सबै सुरक्षित छन् र स्वास्थ्यमा गम्भीर चोटको कारण हुन सक्दैनन्। यद्यपि, तिनीहरूमध्ये केही सीमित अझै पनि सीमित मात्रामा खाना खानका लागि सिफारिस गरिएका छन्, जबकि अन्य छैनन्। सबैभन्दा हानिकारक मध्ये एक E202 को अतिरिक्त हो। मानव शरीरमा असर, डब्लुएचओ को अनुसार, कम से कम छ। तथापि, केही वैज्ञानिकहरूले यस सत्यलाई प्रश्न गर्छन्। तर तिनीहरू के यो यति धेरै शर्मिला छन्?
E202 के हो?
Additive E202 वा पोटेशियम सोरबेट स्वाबिक एसिडबाट सर्बिक अम्लबाट उत्पन्न हुन्छ । रासायनिक बिन्दुबाट, यो केवल एक एसिड नुन हो र सूत्र सी6एच7के को2हो । यो बीउ र बिरुवाहरु को खपतबाट प्राप्त हुन्छ (उदाहरणका लागि, पर्वत को खरानी), कम प्रायः संश्लेषित। पहिलो पटक यो 19औं शताब्दीको दोस्रो भागमा सम्पन्न भयो। तर केवल 20 औं शताब्दीमा यसको एंटीमिसेबियल गुण पत्ता लगाइएको थियो। केही पछि, पोटेशियम सर्बेट व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिएको थियो।
यस खाद्य पूरक को गुणहरुको विपरीत स्वास्थ्य मा प्रभाव अब पनि कम अध्ययन गरिएको थियो। यसैले, यो निश्चित छ भनेर जान्छ कि E202 को अतिरिक्त मोल्ड कवक र खमीर को विकास लाई कम गर्दछ, यसैले यो पनीर र साउसेज को शैल्फ जीवन को विस्तार गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको अतिरिक्त, उनीहरूको न त स्वाद र गन्ध छैन। यसले यसलाई विभिन्न कन्फेक्शनरी डेसर्टमा संरक्षकको रूपमा थप्न सम्भव बनाउँछ, सब्जी र फल राख्छ र रसहरू। चूंकि यो पुरा तरिकाले एक अम्लीय वातावरण मा पनि व्यवहार गर्दछ, पोटेशियम सर्बेट अक्सर मसालेदार र मसालेदार एशियाई सॉस मा पाया जान सक्छ।
तर मूलतया, निस्सन्देह, उसले अन्य उद्योगको लागि धन्यवाद, खाद्य उद्योगमा आफ्नो लोकप्रियता पायो। E202 एक अतिरिक्त हो जो पानी मा राम्रो तरिकाले भंग गर्दछ। त्यसैले, 1 लीटर तरलमा यो 138 ग्राम हुन सक्छ। यो उत्पादनहरु को संरक्षण को लागि आवश्यक भन्दा अधिक छ।
पोटेशियम सर्बेट को बारे मा बोलते हो, यो निश्चित संग भन्यो कि यो सबै भन्दा लोकप्रिय खाद्य additives मध्ये एक भन्न सकिन्छ। त्यसैले, यो प्रायः सब्ज र फलफूलको औद्योगिक क्यानडामा थपिएको छ। र यी सबै प्रकारका छनौटहरू, मरिनाडेडहरू, जाम, कम्पासहरू र रसहरू हुन्। यसले तिनीहरूमा ढाँचाको रूप रोक्छ, र यसैले शेल्फ जीवनलाई लामो पार्छ। प्रत्येक 100 किग्राको समाप्त उत्पादनको लागि 100-200 भन्दा बढी ग्राम हुनेछैन। यो मानिएको छ कि यस रकममा, पोटेशियम सर्बेटले स्वास्थ्यमा कुनै प्रभाव पारेको छैन।
यो लगभग सधैं तेल-मोटो उत्पादनमा उपस्थित छ। र यो मार्जिन, मेयोनेज र सबै प्रकार को चीजहरु छ। लोकप्रिय गर्म सॉस (सरसफाइ, केचअप, सोयाबीन र अन्य) मा, E202 को अतिरिक्त पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामान्यतः यो 100 किलोग्राम उत्पादन भन्दा 100 ग्राम भन्दा बढी छैन। अनि निस्सन्देह, यो धूम्रपान गर्ने उत्पादन, डिब्बाबंद माछा र अदुवा कार्बनटेड पेय र मदिरा को एक भाग हो। सामान्यतया कम पोटेशियम सर्बेट राई रोटीको सतह प्रशोधन गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ।
के कुनै हानि छ?
एकै ओर, डब्ल्यूएचओ भन्छन् कि यस्तो आहार पूरक, पोटेशियम सर्बेट जस्तै, स्वीकार्य सीमा भित्र स्वास्थ्य मा असर पर्दैन। वैसे, यो समाप्त उत्पादन को कुल वजन को 0.2% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। अर्कोतर्फ, धेरै वैज्ञानिकहरूले तर्क गर्छन् कि E202 पूरक पर्याप्त अध्ययन भएको छैन र यसको साथ उत्पादहरू संग खाद्य विषाक्तताका घटनाहरू छन्। कसलाई ठीक छ, सबै पछि?
यो पहिले नै साबित भएको छ कि पोटेशियम सर्बेट मानव शरीर द्वारा पूर्णतया अवशोषित हुन्छ, आंत मा यसको घटकहरु लाई नष्ट गर्दछ। यो यस तथ्यसँग हो कि यसको विस्तृत आवेदन जोडिएको छ। Е202 धेरै देशहरूमा एक थपको रूपमा अनुमति दिइएको छ: संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, युरोप, रसिया र सोभियत पछाडिको पछाडि भरमा। तथापि, केहि अवस्थामा, पोटेशियम सोरबेट एलर्जी प्रतिक्रिया हुन सक्छ, जो लाडो र खुट्टाको छाला जस्तो देखिन्छ। बाँकीमा, यो खाना पूरक बिल्कुल हानिकारक विचार गर्न सकिन्छ।
हुन वा होईन?
तथापि, धेरै अब उपसर्ग "ई" संग खाना मा additives को उपस्थिति को बारे मा चिंतित छन्। यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि यो केवल एक वर्गीकरण हो। पोटेशियम sorbate स्वास्थ्यलाई कस्तो असर पार्छ, अझै पनि धेरै अन्य कारकहरु मा निर्भर गर्दछ। जसमा सामान्यतया उपभोग गरिन्छ र कस्तो जीवनशैली मान्छे नेतृत्व गर्दछ।
प्लम वा एक सेब? के गर्न चाहनुहुन्छ?
चिकन पंखको क्यालोरोलिक सामग्री उनीहरु पकाएका छन् मा निर्भर गर्दछ